Kuchithwa izibhamu kothisha ezikoleni - Ilanga News
Home Izindaba Kuchithwa izibhamu kothisha ezikoleni
Kuchithwa izibhamu kothisha ezikoleni
Umnyango uthi lokhu kuzovubela udweshu
ICHITHIWE isiphakamiso sokuba othisha bazivikele ngezibhamu zabo ezise-mthethweni ezikoleni uma bezizwa bengaphephile. Lokhu kuvezwe wuMnyango wezeMfu-ndo eyisiSekelo emuva kokuba iSouth African Liberating Public Service Workers Union (Salip-
swu) iphakamise ukuba othisha bazivikele ngezinganono.
Umnyango uthi uma othisha bengavunyelwa ukuphatha izi-bhamu ezikoleni, lokho kuvubela udweshu nokungalawuleki kwemfundo.
Usihlabe wasihlikiza leso siphakamiso wathi kawuhambi-sani naso.
Ngokwesitatimende esikhi-shwe wuMnyango wezeMfundo eyisiSekelo, ukuphathwa kwezi-bhamu kungadala ingcindezi enkulu kothisha, bagcine bengasakwazi ukugxila emsebenzini abaqashelwe wona wokufundisa.
“Lokhu kungadala udlame olukhulu phakathi kothisha, abafundi nasemphakathini imbala. Abagqugquzeli bodlame emphakathini abahlasela ezikoleni, kumele babolele ejele. Okuqaphelekile wukuthi ingxabano egcina ngokuchitha igazi isuke iqale ngaphandle bese iphelela esikoleni,” kusho isitatimende.
Okhulumela umnyango, uMnu Elijah Mhlanga, uthi bakhatha-zekile ngokungaphephi kothisha ezikoleni.
Uthi amaphoyisa azogasela kungazelele muntu ezikoleni eyophenya ukuthi kabekho yini abafundi abaphethe izikhali nezidakamizwa, abazotholakala ezimeni ezinjalo, bazobhekana nengalo yomthetho.
Ugqugquzele abazali ukuba babambisane nezigungu ezilawula izikole.
“Kakukho okungenziwa wu-mnyango uma uzisebenzela wodwa ekulawuleni udlame olwenzekayo nokubulawa kothi-sha. Umphakathi kumele uba-mbe iqhaza ezikoleni ngokula-wula izingane, zifundiswe ukuziphatha. Kalukho ushintsho oluyokwenzeka uma abazali beyekelela,” kusho uMnu Mhlanga.
Lesi sitatimende sikhishwe njengoba kudutshulwe kwabulawa uthisha emagcekeni aseMa-suku Primary School, eFolweni, eThekwini ngesonto eledlule.
UMnu Sbonakaliso Nyawose ubulawe ngenqwaba yezinhla-mvu phambi kwabafundi, okusoleka umbango wezikhundla njengoba kunezinsolo zokuthi bekulindeleke ukuba aqhoqhobale esokuba nguthishanhloko.
UMnu Mbuyiseni Mathonsi weSalipswu, uthi njengoba be-yinyunyana ebhaliswe ngokuse-mthethweni emnyangweni wezi-sebenzi ngo-2015, banelungelo lokukhuluma emphakathini.
“Sinamalungu afundisayo ezikoleni. Sinenkolelo yokuthi uma uthisha obulewe wayena-kho okokuzivekela, ngabe akashonanga. Isibhamu somthetho ngesokuzivikela,” kusho uMnu Mathonsi.
Previous articleUzozethula ngokusemthethweni kwiMpucuzeko uBhekihonga
Next articleUsekulungele ukuyolwela ijezi kwiBucs